Passenger yemunhu data yakabiwa muBangkok Airways cybersecurity kurwisa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » mhosva » Passenger yemunhu data yakabiwa muBangkok Airways cybersecurity kurwisa
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Technology • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Kuferefetwa kwekutanga kwechiitiko ichi kwakaratidza kusimbisa kuti imwe yemunhu data inogona kunge yakawanikwa inova, zita remutakurwi, zita remhuri, nyika, jenda, nhamba yefoni, email, kero, ruzivo rwekufambidzana, ruzivo rwepasipoti, nhoroondo yekufamba nhoroondo, zvishoma kiredhiti kadhi ruzivo, uye yakakosha ruzivo rwekudya.
Bangkok Airways Public Company Limited yakambotambudzwa nekuchengetedzwa kwekuchengeteka.
Kurwiswa kwakaguma nekusatenderwa uye zvisiri pamutemo kuwana kune yeruzivo system yendege.
Chiitiko ichi chakamhan'arwa kumapurisa eRoyal Thai pamwe nekupa ziviso kuvakuru vane hukama.
Musi waAugust 23, 2021, Bangkok Airways Public Company Limited yakaona kuti kambani iyi yainge yamborwiswa nekuchengetedzwa kwekuchengetedza izvo zvakakonzera kusabvumidzwa uye zvisiri pamutemo kuwana ruzivo rwayo.
Pamusoro pekuwanikwa kwakadai, Bangkok Airways akabva atora danho rekuongorora uye kuita chiitiko ichi, nerubatsiro rwechikwata chekuchengetedza cyber. Parizvino, kambani iri kuongorora, sekukurumidzira, kuongorora data rakakanganiswa uye vafambi vakawirwa pamwe nekutora matanho akakodzera ekusimbisa iyo IT system.
Kuongorora kwekutanga kweiyo chiitiko akazviratidza kusimbisa kuti imwe yemunhu data inogona kunge yakawanikwa inova, zita remutakurwi, zita remhuri, nyika, murume kana mukadzi, nhamba yefoni, email, kero, ruzivo rwekufambidzana, ruzivo rwepasipoti, ruzivo rwekufamba kwenhoroondo, ruzivo rwekadhi rechikwereti, uye yakakosha ruzivo rwekudya. Iyo kambani zvakadaro, inosimbisa kuti chiitiko ichi hachina kukanganisa mashandiro ekambani kana eaironautical chengetedzo.
Chiitiko ichi chakamhan'arwa kumapurisa eRoyal Thai pamwe nekupa ziviso kuzviremera zvakakodzera. Pamatanho ekutanga ekudzivirira, kambani inokurudzira zvikuru vafambi kuti vataure nemubhengi wavo kana kadhi rechikwereti uye vatevedze rairo yavo uye nekuchinja chero mapassword akakanganiswa nekukurumidza.
Pamusoro peizvozvo, kambani inoda kuyambira vafambi kuti vazive chero fungidziro kana vasina kukumbira mafoni uye / kana maemail, seanorwisa angave achizviti Bangkok Airways uye achiedza kuunganidza dhata rake nehunyengeri (inozivikanwa se 'phishing' ). Iyo kambani (Bangkok Airways) haisi kuzobata chero vatengi vachikumbira ruzivo rwekadhi rechikwereti uye chero zvikumbiro zvakadaro. Kana zviitiko zvakadaro zvikaitika, vafambi vanofanirwa kutora matanho epamutemo.
W. Kami anoti:
Nyamavhuvhu 28, 2021 pa15: 43
Bangkokair yambiro ndeyechokwadi here kana kunyepa pachayo?
Ini ndinoshamisika nekuti kazhinji vanonamira tsamba ine zita rangu - kwete chete 'Anodiwa mutengi'.
Pamusoro pezvo nhamba dzese dzenhare dzakapihwa dzakasiyana nenhamba dzadzo pawebhusaiti dzazvino?